Mareykanka oo mar kale muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Mareykanka oo mar kale muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Soomaaliya
Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan Safarada ay ku tagayaan Soomaaliya, qataro dhinaca Amniga oo ka jira awgeed.
Qoraal ka soo baxay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay inay jirto hanjabaadyo joogto ah oo ka imaanaya Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab.
Muwaadiniinta Mareykanka ayaa lagu wargeliyay inay ogaadaan halista afduubyo ka imaan kara kooxaha Argagixisada, kaasoo ka dhaca qeybaha Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland iyo Puntland.
Sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka in Mareykanka aanu Safaarad ku laheyn Soomaaliya, waxaana digniinta la soo saaray ay la mid tahay mid uu Mareykanka horay u soo saaay 1-dii October ee sanadkii 2015.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in xaalada ammaanka Soomaaliya aanay wali deganeyn oo halis ah, sanadkii hore Al-Shabaab ayaa weeraray illaa sideed hotel caan ah oo lagu dilay muwaadin Mareykan ah.
Al-Shabaab ayaa sii wada weerarada ay ku hayaan dowladda Soomaaliya, Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo bartilmaameedyo hey’adaha ajnabiga ah ee taageeraya dowladda Soomaaliya iyo AMISOM.
Kenya ayaa waxa ay sheegtay in ay dishay dagaal yahano ka tirsan al-shabaab
Axmed Madoobe oo markii ugu horeysay la kulmay Golaha Wasiirada cusub ee jubbaland (Daawo Sawirada)